Fahavaratra 2016, inona no ho hitanao any Alemana | Vaovao momba ny dia
Fahavaratra 2016, inona no ho hita any Alemana
Mariela Carril | | Alemania, Inona no ho hita
Alemana, ny lehiben'ny Vondrona eropeana, dia nitombo teo amin'ny resaka fizahan-tany ka ankehitriny ny toetr'andro dia sariaka kokoa ary ny hatsiaka dia fahatsiarovana mety fotoana tokony hitetezana ity firenena ity ary hahitana ireo toerana fizahan-tany tsara indrindra azony.
Alemà dia manana manintona maro Ary ny lalam-pitaterana mety misy dia mety ahitana ny sasany amin'ireo tsara indrindra: Berlin, Potsdam, Hamburg, Munich y Neuschwanstein. Ary ahoana? Afaka manisa eo amin'ny folo andro na latsaka ianao raha manafoana ny fijanonanao eto an-drenivohitra. Andao hojerentsika avy eo izay ho hitanao amin'ireo toerana tsirairay alehany ireo sy ny fomba fampiraisana azy rehetra.
5 Tranon'i Neuschwantein
Berlin no vavahady mankany Alemana mahazatra kokoa mba hahafahanao mamadika azy io ho lasa fiaingana sy fahatongavana. Manana manintona ara-jeografika sy ara-tantara: Ny vavahady Brandenburg, Checkpoint Charlie, ny rindrin'i Berlin misy ny Fahatsiarovana sy ny East Side Gallery ary ny tranombakoka sasany, miankina amin'ny tsironao. Azonao atao ihany koa ny mandehandeha eny amin'ny lalana falehan'ny Prenzlauer Berg, mamaky ny Tiergarten Park ary rehefa milentika ny masoandro dia mivoaha amin'ireo bara any Neukölln, Friedrichshain na Kreuzberg.
Amin'ny faran'ny herinandro dia misy tsena parasy marobe hizaha ka raha sabotsy na alahady dia araraoty. Fahatsiarovana ny rindrin'ny Berlin Manakaiky ny S-Nordbahnhof izy io ary eo amin'ny fivoahan'ny gara dia manomboka fantatrao ny tantaran'ilay toerana, ny rindrina ary ireo tobin'ny matoatoa izay misy ny tioneliny handosirana avy any Atsinanana ka hatrany Andrefana. Misy fitsangatsanganana mitarika ny rindrina ary afaka manofa audiogy ianao amin'ny 10 euro isan'andro na 8 mandritra ny adiny efatra. Raha mahaliana anao ny lohahevitry ny fampiraisana dia azonao atao ny mitsidika ny Tranombakoky ny tantara Alemanina izay misokatra manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva isan'andro.
Tsy afaka manao izany rehetra izany ao anatin'ny iray andro ianao dia manombana eo anelanelan'ny roa sy telo andro any Berlin.
Avy eo ianao dia afaka mandeha sy manao a fitsangatsanganana an-andro any Potsdam kanto, ny fonenan'ny mpanjaka prussianina teo aloha. ny latsaky ny adiny iray mitaingina lamasinina avy any Berlin ka tsy dia lafo io. Eto dia azonao atao ny mitsidika ny Castle of Frederick the Great natsangana tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, mandalo ny Lapan'i Orangerie sy ny zaridainany, akaikin'ny Sanssouci Park ary amin'ny alalàn'ny tanàna Holandey miaraka amin'ireo trano keliny mahafatifaty.
Tonga aloha ianao ary manam-potoana hanaovana ny zavatra rehetra.
Hamburg dia lehibe sy manan-danja tanàna seranan-tsambo. Afaka mandeha any ianao amin'ny bus avy any Berlin amin'ny dia adiny telo. Tsy tapaka ny bisy na andro na alina ary latsaky ny 10 euro ny vidiny. Azonao atao ihany koa ny tonga amin'ny lamasinina haingam-pandeha, ny ICE, ao anatin'ny adiny roa fa miaraka amin'ny vidiny 20 euro raha mividy mialoha ianao. Inona no hita any Hamburg?
Tsara izany mandehandeha mamaky ny faritra amoron-tsiraka miaraka amin'ireo tranobe biriky mena mahafinaritra, saika ny trano fitehirizana taloha rehetra, raha mafana dia afaka mihinana ianao ary miala sasatra ao amin'ny Kianja Elbstrand amin'ny ony Elbe na mandray ny sambo ary mihodinkodina, miakatra sy midina ilay tohatra blakenese, mamakivaky ny distrikan'i Schanze sy Karo, tena lamaody, ary raha mijanona matory ianao dia ny Red Light District no Reeperbahn. St. Pauli dia manana ny azy ihany koa.
Any Hamburg dia afaka mijanona iray andro irery ianao, izay fitsangatsanganana, fa tena roa na telo andro no mety. Roa farafaharatsiny. Avy eo ianao dia mitsambikina mankany Munich.
Any bavaria. Amin'ny fahavaratra dia fenoiny zaridaina labiera, zaridaina labiera, ka tsara izany. Munich dia tanàna hafa noho Berlin sy Hamburg, tanàna misy tanàna mifangaro. Na vohitra lehibe. Raha nankany Hamburg ianao taloha, avy eo dia afaka mandray bus ianao (dia adiny valo ny dia), na ny lamasinina maharitra adiny enina.
Any munich afaka mandeha mamaky ny English Garden ianao, goavana, tsara tarehy ary kanto, mifanena amin'ny Michaelskirche, fiangonana Renaissance tsara tarehy, fitsaharana amoron'ny renirano Isar, tsidiho ny Lapan'i Nymphenburg ary mazava ho azy, miakatra amin'ny rihana ambony an'ny Neues Rathaus. Mora ny fiakarana ary mahafinaritra ny fomba fijeriny. Tranombakoka? Raha tianao ny kanto dia afaka mitsidika ny Tranombakoka Pinakothek, andrim-panjakana dimy amin'ny fitambarany.
Izy io dia trano mimanda, izay toa zavatra tsy ao amin'ny angano. Manodidina ny adiny roa eo ho eo miala an'i Munich ao Schwangau no misy azy. Eo akaikin'i Munich ianao dia akaiky dia akaiky ka toerana tsara indrindra. Azonao atao ny mandroso sy miverina na mijanona ao amin'ny iray amin'ireo tanàna ao amin'ilay faritra. ihany koa afaka mankany ianao amin'ny lamasinina avy any Munich mankany amin'ny tanànan'i Füssen mandritra ny adiny roa sy sasany.
Avy eo ianao dia mandray bus 73 mankany Steingaden Feuerwehrhaus na 78 mankany Tegelbergbahn Schwangau. Fiaran-dalamby sy bus, miaraka, mitentina manodidina ny 60 euro. Mora ny mahatratra ny lapa: o mandeha an-tongotra 40 minitra ianao miakatra eo afovoan'ny ala mahafinaritra Na ianao mandray ilay bisy miakatra sy midina. Ny fidirana amin'ny trano mimanda dia mitentina 12 euro ary raha mitsidika ny roa ianao, dia misy lapan'olon-kafa eo akaiky eo, 23 euro. Rehefa mividy ny tapakila ianao dia manana fotoana fidirana ka aza tara satria raha tsy mahita ny fitsidihana ianao dia mandoa indray.
Mendrika ny mitsidika ao anatiny ve ianao? Ny marina dia izay ny efitrano anatiny dia tsy mahavariana ary haingana be ny fitsidihana ary tsy mahazo maka sary ianao… Ka tokony hieritreritra an'izany ianao. Etsy ankilany, amin'ny fahavaratra dia toerana fizahan-tany tokoa izy io ary manana mpitsidika an'arivony ka raha afaka tonga aloha ianao. Mivoha amin'ny 8 maraina
Rehefa nahalala ny tsara indrindra any Berlin, ny tsara indrindra any Potsdam, ny tsara indrindra any Hamburg ary ny tsara indrindra any Munich, miampy ny trano mimanda tsara indrindra eran'izao tontolo izao, mieritreritra aho fa afaka milaza ianao fa nitsidika an'i Alemana. Ny tondrozotra dia tondroina, tsy misy resaka mandeha lavitra na mitondra fiaramanidina eo anelanelan'ny tanàna. Mifamatotra toy ny vakana amin'ny rojo izy ireo. Ny folo andro dia vanim-potoana tsara hanaovana ity dia ity, na dia efa nolazaiko anao etsy ambony aza raha tianao kokoa ny lohahevitra iray noho ny iray hafa, dia azo ovaina hatrany ny zotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Alemania » Fahavaratra 2016, inona no ho hita any Alemana
Sentinel Avaratra, nosy mpihinana olona